YIU Virtual Learning Environment
သင်တန်းအပ်ရန် . .
သင်တန်းအပ်ဖို့ အမည်စာရင်းပေးသွင်းရန် အပြာရောင် သင်တန်းအပ်မည် ဆိုသည့် Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ပေါ်လာသော Form တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပြီး Submit ကို နှိပ်ပေးပါ။
သင်တန်းစုံစမ်းချင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ အဆင်မပြေတာဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ချင်ရင်. .
+959953303596, +95931560855 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ Manager ဆရာဦးဘိုဘိုအောင်နှင့် တာဝန်ခံဖြေကြားမည့်သူ မှာ မဝတ်ရည် ဖြစ်ပါတယ်။ youthvlemm@gmail.com ကိုလည်း Mail ပို့ ၍ စုံစမ်း မေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းတက်ဖို့ ဘာလိုအပ်မလဲ . .
Email Account တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်နှင့် ကွန်ပျူတာ၊ Tablet သို့မဟုတ် Mobile Phone လိုအပ်ပါတယ်။ Email Account မရှိရင် YIU VLE Team က သင့်အတွက် Email Account အသစ်တစ်ခု ပြုလုပ် ပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်တန်းကြေးပေးသွင်းရန် . .
သင်တန်းအပ်ရန်အတွက် Wave, KBZ Pay, CB Pay များအပြင် KBZ, AYA, CB Bank Account များ အသုံးပြု၍ သင်တန်းကြေးပေးသွင်းနိုင်ပါ တယ်။ သင်တန်းကြေးပေးသွင်းပြီးပါက အွန်လိုင်း ကနေ Voucher ပြန်လည် ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်တွေဖတ်ချင်ရင် . .
စာအုပ်တွေကို ငွေကျပ် ၂၀၀၀ ပေးသွင်း၍ ဖတ်ရှု့ နိုင်ပါတယ်။ ဆရာ ဦးဇော်လင်းရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ် အချို့ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်များဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ် အမည်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောပေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ Download လုပ်ခွင့် တော့မရှိပါ။ တစ်အုပ်ကို ၆ လ ပေးဖတ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် . .
YIU Campus (1): 205 – 211, First Floor, Building (18), Above AYA Bank, MICT Park, Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
YIU Campus (2): 97 B, Kabaraye Pagoda Road, Near Pearl Condo, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
YOUTH Training Center: No (189/195), Pansodan Office Tower,6Floor (A), Pansodan Middle Block, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
Facebook: YOUTH VLE
Phone: +959953303596, +95931560855
© Copyright YIU Virtual Learning Environment 2022